Soo dejisan MiniTool Partition Wizard 11.4 ... – Vessoft
WindowsNidaamkaDisks adagMiniTool Partition Wizard
Bogga rasmiga ah: MiniTool Partition Wizard
MiniTool Barzakh Wizard – software awood ugu leh shuqulka complete la drives adag. software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan, tirtirto, guuraan, diinta iyo ucabirto maqaal qoruhu ah. MiniTool Wizard Barzakh awood si loogu badalo nooc oo cajaladaha oo aan khasaaraha xogta iyo badasha nidaamka file baruurta galay NTFS. software ka kooban qalab inuu ka soo kabsado Partition tirtiray ama lumay haddii weerar ku virus ama qaybinta khalad ah maqaal qoruhu. MiniTool Wizard Barzakh kuu ogolaanayaa inaad si ay u tijaabiso awoodda shaqo drive ah.
Abuur, dhaqaaqaan iyo diinta ee maqaal qoruhu ugu
Helay ee maqaal qoruhu tirtiray ama laga badiyay
Shaqeynta nidaamka faylka
Waafajin lahaa ee maqaal qoruhu
Soo dejisan MiniTool Partition Wizard
Soo-kabashada Xogta Awoodda MiniTool – waa barnaamij si fudud loo adeegsan karo si loo soo ceshado xogta noocyada kala duwan ee kumbuyuutarkaaga iyo sideyaasha xogta kala duwan. Software-ka wuxuu taageeraa kumbuyuutarrada adag iyo nidaamyada faylka ee noocyada kala duwan.
Faallo ku saabsan MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard Xirfadaha la xiriira
Tool inuu ka soo kabsado faylasha tirtiray ama laga badiyay. Software la shaqeeyaa nidaamyada file caan ah oo soo kabanayo files ku sidayaal macluumaad kala duwan.
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay in la abuuro, loona beddelo, beddeliyo, la isugu daro ama loo kala qeybiyo faylasha PDF iyo soo saaro bogaga gaarka ah iyaga.